उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बी एन्ड सी अस्पतालले विरामीलाई बन्धक::देश र जनताप्रति समर्पित
उपचार खर्च नतिरेको भन्दै विर्तामोड स्थित बी एन्ड सी अस्पतालले एक विरामीलाई बन्धक बनाएको छ । जिल्लाको पाथीभरा याङ्बरक गाउँपालिका २ थेचम्बुका १७ वर्षीय सन्देश लिम्बू आफ्नो उपचारका क्रममा लागेको पैसा बुझाउन नसक्दा स्वस्थ भए पनि घर जान पाएका छैनन् ।
संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्या उपचारको हक ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको अर्थ नागरिकको स्थास्थ्योपचारमा सरकारको दायित्व हुन्छ भन्ने हो । तर यो हकको प्रयोग गर्न दिइएन ।
२०७५ मंसिर २६ गते झापाको बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी अस्पतालमा भर्ना भएका लिम्बू उपचारबापत लागेको खर्च बुझाउन नसक्दा १५ दिनदेखि अस्पतालकै शय्यामा बन्धक छन् । अहिले उनको स्वास्थ्यमा भने सुधधार आएका खबर आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ ।
दैनिक कति पटक र कसरी पानी पिउने ?
तुरुन्तै गर्भधारण गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो गर्नुहोस्
करिव ९६ % ले दाँत माझ्न जान्दैनन् , तपाइले कसरी माझ्नुहुन्छ ?
औषधि खादैहुनुहुन्छ ? यि कुरामा अनिवार्य ध्यान दिनुस